Akatholakali umshayeli owanyamalala | IOL Isolezwe
Akatholakali umshayeli owanyamalala
Isolezwe / 12 February 2013, 10:13am / SIMPHIWE NGUBANE noNOKUBONGWA PHENYANE
UNKsz Zama Dladla olahlekelwe ngudadewabo obeshayela amatekisi.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
SIMPHIWE NGUBANE noNOKUBONGWA PHENYANE
USADUNGUZA ebumnyameni umndeni womshayeli wetekisi ongowesifazane onyamalale ngoDisemba netekisi eyayilayishe abagibeli isuka eThekwini ilibangise eMandeni.
Ushicilelo leSolezwe langoJanuwari 30 nonyaka lubike ngokunyamalala kukaNksz Noma Dladla (39) okuze kube yimanje umndeni wakhe usumbheke emakhazeni nasezibhedlela awumtholi.
Umnikazi wetekisi, uMnuz Gqokinsimbi Ngubane, wazifikela mathupha emahhovisi aleli phephandaba ezobika ngale mbedumehlwana ayethi imphithanisela ngekhanda.
Ohlobene noNksz Dladla, okunguNksz Zama Dladla ubesesiteshini samaphoyisa iDurban Central izolo ezobika ngokunyamalala kukamamncane wakhe athe sebemthungathe kuzo zonke izindawo abekhonjwa kuzona kodwa lutho ukumthola. Ubephelezelwa yisoka elidala likaNksz Dladla nomngani.
“Siyakholelwa wukuthi usaphila umama wethu lapho ekhona ngakho sicela ubuye unembeza kubantu ngokuthi basibuyisele yena. Noma ngabe sewabulawa sicela okungenani basitshele lapho isidumbu sakhe sikhona ukuze sibone ithambo lakhe silingcwabe ngoba abehli ubuthongo kusuka mhlazane enyamalala,” kusho uZama obesuka ePort Shepstone.
Umngani kalo somatekisi ongathandanga negama lakhe esabela ukuphepha kwakhe, utshele Isolezwe ukuthi ugcine ukukhuluma noNksz Dladla ngoDisemba 22 emcela ukuthi amwashele izingubo zokugqoka. Uthi ngaleso sikhathi watshelwa ngumshayeli wetekisisi ukuthi useseMvoti endleleni ubuyela eThekwini.
“Ngamlinda ubusuku bonke ngaze ngagoduka engafiki. Ngakusasa ucingo lwase lukhala lungabanjwa muntu, ekugcineni lwaphendulwa yindoda eyazibiza ngoMandla ikhuluma ulimi lwesiZulu olungaqondile eyathi isebenza noNoma erenki yamatekisi engayichazanga. Yabuye yajika inkulumo yathi iseCasino ngakho mangiphuthume emakhazeni asePinetown uma ngifuna ukubona isidumbu sikaNoma,” kuchaza umngani kasomatekisi.
Uthe bamthungatha bancama umngani wakhe okuze kube yimanje abamtholi enombolo yocingo lwakhe ayisasebenzi uma beyifonela.
Okhulumela amaphoyisa, uCaptain Khephu Ndlovu, uthe uphenyo luyaqhubeka, wanxusa nanoma ngubani ongaba nolwazi ukuthi ukuziphi izinkalo uNksz Dladla ukuba athinte uLt Colonel Zandile Sibeko enombolweni ethi: 031 325 4281/5306.
“Sivule icala lokulahleka komuntu. Sinxenxa abantu abangaba nolwazi olungaholela ekutholakaleni kwakhe ukuba banikezele ngolwazi emaphoyiseni,” kusho uNdlovu.
Khonamanjalo, sitholwe ngumfana olusa izinkomo sidindilize ehlathini isidumbu somshayeli wetekisi onyamalale ngenyanga edlule ngesikhathi ehamba ekhaya ethi uyobona inyanga kwaba wukumgcina. Isidumbu sikaMnuz Sydney Thulani Gcabashe (47) waKwaMaphumulo sitholwe sesimathambo amhlophe kunesibhamu eduze kwaso. Amaphoyisa asola ukuthi wazibulala ngaso.